35 Halloween ntu Art Designs iji nwalee October a - Mma
Sexhụnanya Mmekọahụ Olee Otú Iji Jụọ Ọkachamara Nyocha Nyocha Ezi Ntụziaka Agba Style Anu Ulo Ahụike Mma Agbamakwụkwọ Kichin Na-Adịgide Adịgide
35 Halloween Nail Art Designs Nke Na-abụghị * Ntọala Black Mani gị
The spookiest ezumike nke afọ dị anyị, na ọ bụ oge ka ị na-akpatre okporo mmiri bụ isi ịkpụcha mbọ aka (ndo, adịghị mwute). Mgbe ị na-achọ ihe ekike, kedụ maka aghụghọ ma ọ bụ ịgwọ onwe gị ụfọdụ ihe osise Halloween dị mfe? Ma ị chọrọ ime ka ọ dị mfe site na ịtinye ụfọdụ akwụkwọ mmado ma ọ bụ na ị dị njikere iji ihe osise niile pụọ, lee atụmatụ mmemme 35 - nke ị nwere ike ime nke ọma n'ụlọ.
Njikọ: Ihe nkiri kacha mma nke Halloween nke oge niile
Akwukwo nke Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) kesara na Jul 25, 2020 na 8:44 am PDT
1. Eke Ọgba
Obere ederede nwere ike ịga ogologo oge. Gosi ụfọdụ isi Freddy Kreuger vibes na ngwaọrụ ole na ole dị mfe - ntupu, brọsh ịsa ezé na polish. Tinye akwa mkpuchi isi ma hapụ ya ka ọ takọọ kpamkpam, tinyezie ntupu na ntu gị. Họrọ ngwoolu agba ma gbanye ya na ntupu iji mee ka esemokwu ụfọdụ. (Ndụmọdụ: Chebe ntupu na pobi pin.) Nke a bụ nkuzi .)
Nweta imewe ahụ: Annie Mesh Fabric ($ 7); Chanel ($ 28)
Akwukwo nke Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) kesara na Ọkt 21, 2019 na 6: 26 am PDT
2. Anya Cat
Nwee anya niile na gị ... n'ụzọ nkịtị. Mgbe ịmalitere na uwe ojii, gbalịa aka gị na -emepụta anya edo edo site na iji obere ahịhịa ebe ọ bụla ịchọrọ ịme ntu ọ bụla. Nke a bụ nkuzi maka ụfọdụ inspo.
Nweta imewe ahụ: Na-agbapu ahịhịa ($ 8); Essie odo odo ($ 9); Essie ojii ojii ($ 10); Essie akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ($ 10)
A post na-akọrọ site? Ikowe Nguyen aka Ọnwa? (@egha_egha) na Ọkt 12, 2019 na 7: 43 am PDT
3. Ndụmọdụ French ọbara
Were ezumike gị kpochapụwo ọcha maka freaky mberede kama. You nwere ike iji a dotting ngwá ọrụ ma ọ bụ striping ahịhịa ike mkpumkpu ahịrị ma nweta dripping mmetụta.
Nweta imewe ahụ: Ngwunye ngwa ngwa ($ 7); Ntu Inc na-acha uhie uhie ($ 15)
Akwukwo nke Madeline Poole kesara (@mpnails) na Ọkt 31, 2018 na 1:44 pm PDT
4. Ududo Kwusi
Echiche nke ududo na-arịdasị gị bụ ihe kachasị njọ nke ndị mmadụ, mana egwuregwu ihe e kere eke na mbọ gị na-ada ka ụzọ mma ọzọ. Jiri ngwongwo dotting kee aru mgbe mkpa ncha nwere ike ime ukwu asatọ.
Nweta imewe ahụ: Sally Hansen nwa ojii ($ 6); Ngwunye ngwa ngwa ($ 7)
Akwukwo nke Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) kesara na Ọkt 30, 2019 na 9: 46 am PDT
5. Silver Spider Webs
N'ikwu okwu banyere ududo, nwalee mmetụta oghere a na-adịghị mma. Jiri ahịhịa mepụta ahịrị diagonal ise tupu ijikọ ha na obere ntagide. A pụkwara iji teepu ntu mee ihe iji nyere aka mee ka imepụta ihe karịa otu.
Nweta imewe ahụ: Ntu usoro ihe osise ntu ($ 9) Essie na-acha ọla ọcha ($ 9)
A post nke JINsoon kesara (@jinsoon) na Ọkt 31, 2019 na 10:36 am PDT
6. Agba Agba Agba Agba
A fang-tastic imewe iji ejiji gị vampire. Tinye akwa mkpuchi isi na-acha uhie uhie tupu ị gafee ọkara nke ntu gị na-eji oji ojii. Echegbula onwe gị banyere ahịrị ndị kwụ ọtọ-nke ahụ bụ akụkụ egwuregwu. (Mana ọ bụ nhọrọ zuru oke iji teepu na-agba agba iji hazie atụmatụ gị.)
Nweta imewe ahụ: Jinsoon acha uhie uhie ($ 18) Jinsoon nwa Polish ($ 18)
A post nke JINsoon kesara (@jinsoon) na Ọkt 31, 2019 na 2: 13 pm PDT
7. Ogba aghara
Ọ bụghị ihe osise niile nke Halloween ga-abụ ududo, nwamba ojii na ugu. Were usoro a na-adịghị ahụ anya maka ezumike ahụ. Enweghị ụzọ ziri ezi isi mee nke a na-ahụ anya ka ahịhịa ahịhịa na-arụ ọrụ niile ma mepụta obere strok nke agba ọ bụla.
Nweta imewe ahụ: Jinsoon nwa Polish ($ 18) Jinsoon ọcha Polish ($ 18)
Akwukwo nke Canishiea J. Sams kesara ????????????? (@onyedikachi_) na Ọkt 27, 2019 na 8: 05 pm PDT
8. Halloween ọla
Chọrọ anya dị egwu mana ịbịaru abụghị ajụjụ? Jiri akwa ọla aka mee ka mbọ gị dị ọcha. Tinye akwa isi ị họọrọ tupu dotting ntu mama ebe ịchọrọ itinye mkpuru gị. (Ntuziaka: Mee ntụpọ pere mpe karịa nha nke mkpuru ahụ iji zere ihe ọ bụla ị ga-eme iji mebie ihe ị na-eme.) Mgbe ahụ, jiri tweezer tinye ọla ahụ wee jiri nwayọ gbadaa tupu ị gaa n'ihu na ntu ọzọ.
Nweta imewe ahụ: Ihe bara nnukwu uru ($ 11)
Akwukwo nke Madeline Poole kesara (@mpnails) na Aug 9, 2018 na 11: 12 am PDT
9. Candy ọka French Atụmatụ
Malite site na ijide agba odo, oroma na ọcha ọcha maka ụtọ a na-atọ ụtọ na French oge ochie. Gbakwunye ọcha na ntu gị niile dị ka isi tupu i jiri oroma wee jiri odo na nsọtụ.
Nweta imewe ahụ: Sally Hansen acha odo odo ($ 4); Sally Hansen na-acha ọcha ọcha ($ 7)
Edemede nke Sierra Leone na-akọrọ? (@onyedikachi_) na Ọkt 26, 2019 na 9: 05 am PDT
10. Disney Ime Anwansi
Ọ bụrụ na ihe nkiri Disney Halloween (ma ọ bụ Mickey's Not-So-Scary Halloween party) na-enweta gị na mmụọ ezumike, nhazi a bụ maka gị. N'ezie, ọ na-ewe ntakịrị nkà karịa atụmatụ ndị ọzọ, mana anyị enweghị obi abụọ ị nwere ike ijikwa ya na aka na-adịgide adịgide.
Nweta imewe ahụ: Ntu usoro ihe osise ntu ($ 8)
Edemede nke Sierra Leone na-akọrọ? (@onyedikachi_) na Ọkt 20, 2019 na 5: 21 pm PDT
11. Akwụkwọ mmado Spooky
Mgbe ndị a dị aka ejiri aka (ma ị nabatara ịnwale aka gị na ịmeghachi atụmatụ ndị a), anyị chere na akwụkwọ mmado na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị wepụ ihe mmado ahụ ma debe ha ebe ọ bụla ịchọrọ, wee debe ha ebe ha nwere uwe elu.
Nweta imewe ahụ: Akwụkwọ mmado ($ 8)
Akwukwo nke Abby Johnson kesara (@abbydoesnails) na Ọkt 22, 2019 na 6: 35 am PDT
12. Amoosu Mbipụta
Enweghị ekwesighi iji chepụta mbipụta ndị a. Site na ọnwa gaa na kristal kristal, jiri ahịhịa na-agba agba iji dọpụta ihe ndị amoosu dị mkpa nye ike gị.
Nweta imewe ahụ: Sally Hansen na-acha ọcha ọcha ($ 7); Ntu ihe osise uzo ($ 8)
Edemede nke Sierra Leone na-akọrọ? (@onyedikachi_) na Ọkt 9, 2019 na 8:30 am PDT
13. Nightmare Tupu ekeresimesi
Ọ bụghị Halloween na-enweghị Eze ugu, yabụ ka ntu ọ bụla gosipụta agwa sitere na fim Disney. Ma ọ bụ Jack Skellington, Sally ma ọ bụ Zero, enwere ike ịmegharị ihe a site na iji eriri dị mkpa iji nweta nkọwa niile.
Nweta imewe ahụ: Ntu nkà na-agba mbọ ($ 13)
Akwukwo nke Abby Johnson kesara (@abbydoesnails) na Ọkt 11, 2019 na 6: 16 am PDT
14. Ugwu kwachie
Ezi akara nke ezumike - ugu. Malite na uwe mkpuchi tupu ịme ọkara obi iji mepụta ugu ahụ na-eji ọkụ na-acha ọkụ, wee tinye ahịrị ndị ahụ site na iji ndo ojii na obere ahịhịa. (BTW, ị nwekwara ike ịnwale usoro a dị ka ọnụ ahịa French. Nke a bụ nkuzi .)
Nweta imewe ahụ: Essie ($ 9); Ntu art tool ($ 10)
Ederede nke Nails.INC (@nailsinc) kesara na Ọkt 16, 2019 na 1: 46 pm PDT
15. Ghouly Mọ
Mpempe akwụkwọ boo-tiful nke na-anaghị atụ egwu ịme. Jiri ahịhịa dị gịrịgịrị nwere ike ịmepụta ụdị ọcha dị ọcha tupu ịtinye ntụpọ ojii abụọ maka anya.
Nweta imewe ahụ: Ntu usoro ihe osise ntu ($ 8); Mbọ Inc . ($ 11)
Akwukwo nke Olive na June kesara (@oliveandjune) na Ọkt 23, 2019 na 1: 53 pm PDT
16. Nwamba Ojii
Enweghị ihu ọma n’ebe a. Detuo ajị anụ ahụ, ma lekwasị anya na isi nke ntu gị maka ighikota na ọkara ọnwa. Ọ bụ nhọrọ iji tinye ụfọdụ pusi anya iji weta ihe ntu na ndụ.
Nweta imewe ahụ: Essie ojii ojii ($ 9)
Akwukwo nke Park Eunkyung (@nail_unistella) kesara na Ọkt 16, 2019 na 4: 33 am PDT
17. Ọkụ na-acha ọkụ
Ma ị nwaa nnwere onwe efu ( nke a bụ nkuzi dị mfe ) ma ọ bụ dabere na akwụkwọ mmado, anya a ga-eme ka mbọ gị bụrụ okwu na-ekpo ọkụ.
Nweta imewe ahụ: Akwụkwọ mmado ọkụ ($ 9)
Akwukwo nke Ruth (@ruthsnailart) kesara na Ọkt 2, 2019 na 9: 23 am PDT
18. Eyeballs na slime Pop Art
Lezienụ anya na nka a. Naanị tinye ụcha isi ọkụ tupu ị na-eji ahịhịa na-adọta adọta anya na slime — ọ dịghịkwa mkpa ichegbu onwe gị maka itinye ebe ahụ.
Nweta imewe ahụ: China Ọkụ ($ 8); Zoya Polish ($ 11); Ntu art tool ($ 12)
A post nke Michelle Saunders kekọrịta (@icheichesaundersjames) na Dec 13, 2019 na 12: 48 pm PST
19. Anụmanụ anụmanụ
Maka ezigbo anụmanụ ndị ọzọ n'ebe ahụ, gosipụta ọnya gị na mmemme Halloween ọzọ gị. Buru ụzọ jiri agba dị iche iche wee malite imepụta ahịrị ndị ọzọ akpọrọ (hụ na ị ga-ahapụ oghere maka mmetụta mbipụta anụmanụ).
Nweta imewe ahụ: Essie ($ 9)
Akwukwo nke Olive na June kesara (@oliveandjune) na Ọkt 21, 2019 na 9:37 am PDT
20. Nkwupụta Aka
Ọ D OK MMA, yabụ na ịchọghị ịhapụ ịga mani to black mani. Anyị na-enweta ya. Ma olee maka ịtụba otu nkwupụta okwu n'ime ngwakọta?
Nweta imewe ahụ: Chanel ($ 28)
A post nke Prissy_Co na-akọrọ (@prissy_co) na Aug 4, 2020 na 2:02 am PDT
21. ometdị Geometric
Jiri udidi na udiri egwuri egwu maka imepụta ihe di mfe. Ntu teepu na-enye ntuziaka dị ọcha, kwụ ọtọ maka ntu ọ bụla.
Nweta imewe ahụ: Eriri teepu ($ 6)
Akwukwo nke Abby Johnson kesara (@abbydoesnails) na Ọkt 18, 2019 na 6: 41 am PDT
22. Supee ya
Kwe ka mbọ gị na-ekwu ihe niile. Y’oburu na ide ihe abughi ihe gi, nwaa ufodu ihe mmado ma obu stencil karia ikpoputa okwu a.
Nweta imewe ahụ: Akwụkwọ mmado ($ 9)
Akwukwo nke Abby Johnson kesara (@abbydoesnails) na Ọkt 16, 2019 na 6: 08 am PDT
23. Matte n'isi
Gloss ekwesighi inwe obi uto. Jidere uwe elu matte ma tinye ya na agba nke ịhọrọ ị ga-ahapụ satin n'isi nke na-adịghị ọcha.
Nweta imewe ahụ: OPI akwa mkpuchi kacha elu ($ 11)
A post nke NAILPRO Magazine (@nailpromagazine) kekọrịta na Ọkt 29, 2019 na 10:18 am PDT
Kpọọ aha ya ugboro atọ, ị ga - ahụ ebe a na - ede Beetlejuice n’akụkụ mbọ gị. Jiri ya pụtara ìhè na agba-acha ọcha, nwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-ike swirls, splats na ududo aghụghọ mmụọ nsọ site '80s kụrụ.
Nweta imewe ahụ: China Ọkụ ($ 8); Orly acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ($ 10)
Akwukwo nke ndi ozo kesara (@artofkia) na Ọkt 24, 2019 na 8:30 am PDT
Otu n'ime egwu kachasị egwu ... mana mee ya nkecha. Soro klọb ndị Loser chọọ mma wee chọọ ntu ọ bụla sitere na IT (jiri ahịhịa dị mkpa maka nkọwa zuru oke).
Nweta imewe ahụ: Uhie uhie uhie ($ 10); OPI pink ($ 13)
Akwukwo nke David Nguyen- Nails Artist (@ davidnails1861) kesara na Ọkt 21, 2019 na 4: 24 pm PDT
26. Onyunyo Mmetụta
Mepụta gradient mmetụta na-eji ọcha na nwa Polish maka a haunting anya. Tinye ncha ọcha dị ka isi tupu ị rute maka ogbo ka ị kpuchie oji ahụ n'isi. Ka akwa nke mbụ kpọrọ nkụ tupu ịmeghachi usoro ahụ n'ihu. Nke a bụ nkuzi zuru oke imewe.
Nweta imewe ahụ: Ogbo ($ 9); Mbọ Na nwa ojii ($ 15); Nails Inc. ọcha ọcha ($ 15)
A post nke ihe efu efu kesara (@vanityprojects) na Ọkt 28, 2019 na 1: 36 pm PDT
27. Ọkpụkpụ Aka
Anya na-ahụ anya n'ezie. Mgbe itinye akwa mkpuchi ojii, jiri obere ahịhịa iji mepụta obere akụkụ anọ, na-eme ka oghere ha pụta iji mee ka ọkpụkpụ nwee mmetụta na ndụ.
A post nke ihe efu efu kesara (@vanityprojects) na Ọkt 14, 2019 na 3:40 pm PDT
Ezi ‘ole ntu tape (ma ọ bụ ọrụ aka na-adịgide) nwere ike nweta nfe mummy a n’ụzọ dị mfe.
Nweta imewe ahụ: Jinsoon ọcha Polish ($ 18)
A post nke ihe efu efu kesara (@vanityprojects) na Ọkt 14, 2019 na 1: 56 pm PDT
Mee ka anya gị hụ agwọ na-adịghị agwụ agwụ ka ọ na-agafe n'aka gị. Ngwunye ahịhịa nwere ike ime ka ntanye na eriri dị ka ha niile na-ejikọta ọnụ.
Nweta imewe ahụ: Ntu art tool ($ 8)
A post nkere Maja Markowicz (@majamarkowicz) na Ọkt 24, 2019 na 10: 59 pm PDT
Gbanye ngwa ngwa ihe osise maka ahịhịa na nchacha ka ị jiri aka gị mee ugu. Tinye akwa mkpuchi oroma tupu ị na-ese ahịrị ndị kwụ ọtọ site na isi ruo n'ọnụ. The fun akụkụ? Mepụta ihu ugu n'ime ọnọdụ ịchọrọ.
Nweta imewe ahụ: Ntu ihe osise uzo ($ 8); China Ọkụ ($ 9)
A post nke na-akọrọ ????????????????????? San Antonio, Texas (@txmanimuse) na Ọkt 21, 2019 na 12: 52 pm PDT
31. Addams Ezinaụlọ
Ọwa gị n'ime Wednesday Addams. Gbanwee ndụmọdụ gị Addams Ezinụlọ -ihe ndị a na-akpali akpali dị ka uwe a na-ahụkarị nke Wenezdee, ududo na udiri ojii iji weta anya ọnụ.
Nweta imewe ahụ: Ntu art tool ($ 10); Chanel ojii Polish ($ 28)
A post na-akọrọ ??????????? _ ????? (@onyedikachi_) na Ọkt 18, 2019 na 1: 34 pm PDT
32. French nke oge a
Ichefu kpochapụwo French ma họrọ maka ndụmọdụ ojii kama. Gaa n'ihu ma tinye mmetụ nke oji na isi. (Ntuziaka: Jiri ndebiri ndebiri iji mepụta ọkara ọkara.)
Nweta imewe ahụ: Ntu nka ndebiri ($ 6); Essie ($ 9)
A post na-akọrọ ??????????? _ ????? (@onyedikachi_) na Ọkt 5, 2019 na 12: 34 pm PDT
33. Obi Oji
Saidnye kwuru na obi nwere ike na-acha uhie uhie? Ihe nchacha ma ọ bụ teepu nwere ike inye aka ịkọwapụta ụdị ahụ tupu ịjuju obi na oji ojii.
Nweta imewe ahụ: Ntu art tool ($ 10)
A post nke BOSKIE Magdalena & Kinga na-akọrọ (@boskietwice) na Ọkt 12, 2019 na 1: 36am PDT
34. Igbe ozu Onodu
Anyị na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ihe ị ga-etinye na mbọ gị, mana olee maka ọdịdị ahụ? Coffin mbọ bụ omume ị nwere ike ịmasị n'afọ niile, mana abalị kachasị njọ nke afọ bụ oge dị mma iji yikwasị ha uwe ojii niile. Nke mbu, gbuputa uzo nke ihe omuma gi tupu i dechaa ha n'otu akuku ma debe elu nke oma (ma obu gosi ya dika o choro). Nke a bụ nkuzi ngwa ngwa ịmụta nna ntu udi.
Nweta imewe ahụ: Ntu faịlụ ($ 6)
Akwukwo nke ndi ozo kesara (@artofkia) na Ọkt 28, 2019 na 10: 06 am PDT
35. Ngwakọta Halloween
Enweghị ihe ọ bụla dị na akwụkwọ iwu na-ekwu na ị nweghị ike igosipụta ihe niile kachasị amasị gị gbasara Halloween na mbọ gị. Akụkụ kachasị mma gbasara mbọ ntu bụ ị nwere ike ime ka ọ bụrụ nke gị. Jiri echiche ọ bụla dị n'elu maka ngwakọta na-eme ya ihe ezumike nke afọ.
Njikọ: 26 Halloween Cocktails Ndị Na-atụ Deltọ
Categories Nyocha Nyocha Nri Anu Ulo
ọgwụgwọ eke maka ntutu isi
eserese calorie maka uru bara uru
kerry Washington net uru
vaseline eji maka ntutu
edozi isi maka ihu oval